Akhri Faashilka Ku Gadaaman Ballanqaadkii Uu Ololaha Ku Soo Galay Madaxweyne Muuse Sannad Kadib | Gabiley News Online
Akhri Faashilka Ku Gadaaman Ballanqaadkii Uu Ololaha Ku Soo Galay Madaxweyne Muuse Sannad Kadib
Intiinii la socotay cadadkeenii ugu dambeeyey ee Sabtidii waxa aanu akhristayasha sharafta mudan halkan kula wadaagnay tiirka koowaad ee qorshihii Buugga Xisbiga KULMIYE ku galay tartankii Ololaha doorashada Madaxtooyada ee Bishan oo kale, maalmahan oo kale sannadkii hore ee 2017 ka qabsoontay guud ahaan dalka, taasi oo aan lafa-gur kooban ku samaynay sida aanay xukuumadda Muuse Biixi Cabdi waxba uga qaban sannadkeedii koowaad dhammaan wixii ay ballan qaaday marka laga tago nidaamka dawliga ah oo sidiisii isaga sii socday inkasta oo duruufo adagi ku hareeraysan yihiin oo qaarkood la kowsadeen muddo xileedka Madaxweynaha.
Tiirka labaad ee Maanafeestihii Xisbiga KULMIYE waxa uu dhigayay ‘Amniga iyo Nabadda’ isaga oo Madaxweyne Muuse Biixi tartankii Ololaha qorshihiisa wax-qabad ku buunbuuniyey sida uu arrintan wax uga qaban doono. Waxa aynu haddaba qormadan maanta ku eegi doonaa waxa uga qabsoomay illaa hadda mudadii sannadka ahayd ee uu Madaxtooyada fadhiyay iyo ballan qaadkiisaasi la xidhiidha qodobkan, waxa uga hir galay innaga oo eegi doonaa marka hore sida uu u dhignaa ballan qaadkaasi oo ah in Xisbiga KULMIYE uu sheegay in muddo xileedkiisa 2017 illaa 2022 uu horumarin ballaadhan ku samayn doono ciidamada qalabka sida ee kala duwan oo ah kuwa suga Amniga qaranka. Xisbiga KULMIYE waxa uu ballan qaaday in uu awoodda saari doono xoojinta iyo casriyeynta ciidamada Booliska Somaliland iyo dhammaan hay’adaha amniga ku tacaluqa. Waxa uu KULMIYE ballan qaaday muddo xileedkiisa Madaxweyne Muuse Biixi in uu muhiimadda koowaad siin doono ilaalinta amniga qofeed iyo hantiyeed ee Mujtamaca reer Somaliland. Waxa uu ballan qaaday in uu kor u qaadi doono tayada iyo waxqabadka Cuqaasha dalka isaga oo sheegay in ay dib u eegis ku samayn doonaan Mushaharaadka ay qaataan. Waxa uu ballan qaaday in uu kordhin doono Mushaharka ciidamada kala duwan isaga sidoo kalena loo dhisi doono dhismayaal iyo dugsiyo tababar oo kale oo casri ah iyo waliba cisbitaallo casri ah oo u gaar ah ciidamada qaranka ee kala duwan.
Aan haddaba is waydiinee Akhriste maxaa ka qabsoomay ballan qaadyadaasi mudadii sannadka ahayd ee Madaxweyne Muuse Biixi xilka qaranka hayay?
Mudadii uu kursiga fadhiyey Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa kala qaybsanaan weyni ku timid shacabka reer Somaliland oo ay saamayn weyn ku yeelatay doorashadii dalka ka qabsoontay. Tani waxa ay saamayn toos ah iyo mid dadbanba ku yeelatay colaado iyo nabad-galyo darro dalka ka dhacday mudadaasi sannadka ahayd. Waxa dagaalo xumi ka dhaceen deegaanada Sanaag Galbeed oo ay dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyeedba ka soo kala gaadhay beelo walaalo ah oo wada daga gobolka. Markii colaaddaasi ay waxba xukuumaddu ka qaban kari wayday waxa gurmad ugu tagay wadaado iyo wax-garad reer Somaliland ah oo heshiis ku soo afmeeray xaaladdaasi. Dhinaca Gobolka Sool gaar ahaan Koonfurta Gobolka Sool tiraba dhawr jeer waxa ka dhacay dagaalo culus iyo xasuuq ay isu gasteen beelo walaalo ahi, waxaana markii ugu horraysay taariikhda Somaliland beelaha Gobolka Sool lagu heshiisiinayaa meel ka baxsan Somaliland iyada oo toddobaadkan loo fadhiyo Magaalada Jigjiga ee caasimadda dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya.
Dadka u kuur gala Arrimaha Ammaanka qaranku waxa ay sheegeen kala qaybsanaanta shacabka Somaliland ee doorashadu saamaysay oo keentay in markii ugu horraysay ay Askar ka tirsan ciidamada qaranku ka goostaan oo ay wakhtigan ku sugan yihiin Puntland iyaga oo duulimaad ku ah dalkana ay halkaasi ka abuureen Jabhad hubaysan, colaadda soo noqnoqota ee beelaha oo aanay xukuumaddu xalal waara u helin ay keentay in doorkii xukuumadda dhaliilo culus looga soo jeediyo arrintan.
Sidoo kale dadka u kuur gala dhinaca amnigu waxa ay sheegeen in ay Somaliland halis kale ugu jirto dhallinyarada aan la jihayn ee shaqo la’aanta iyo rajo xumadu barriinsatay oo ah kuwo halis weyn ku ah amniga qaranka. Tani waa ta keentay ina ay kor u kacaan dambiyada abaabulan ee tuugada, boobka, iyo kufsiga ah ee habeen walba ka dhaca magaalooyinka waaweyn ee dalka oo ay ku kacaan dhallinyaro koox koox u abaabulani. Dhammaan arrimahaasi, mudadaasi sannadka ah ee ay xilka haysay waxba kama aanay qaban lamana aanay iman istaraatiijiyad wax lagaga qabto.
Ballan qaadka uu Muuse Biixi Cabdi ku sheegay Buuggiisii cagaarnaa in uu kobcinayo cuqaasha iyo madax dhaqameedka, wax uga qabsoomaa ha joogtee waxaa kaaga filan in toddobaadkii ugu dambeeyey oo kali ah ay bannaan bax magaalada Burco ku muujiyeen cuqaasha Gobolka Togdheer oo sheegay in aanay ku shaqayn Karin $25 oo kali ah oo ay Bishii xukuumadda ka qaataan hawsha ay hayaana aad u culus tahay.
Isku soo wada duuboo muddada sannadka ah ee durba u dhammaanaysa maalmaha soo socda mudadii uu xilka joogay Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, haba yaraatee wax u kordhay ama uu ka qabtay dhinaca Amnigu ma jirto. Inkasta oo aanay jirin dhibaato weyn oo amni oo qaranka ku dhacday oo xaaladdu iska sidii uun tahay marka laga yimaad dhibaatooyinka Gobolada Bari ka dhacay sannadkan haddana marka laga hadlayo wax qabad iyo wax la taaban karo wax alla wax cusub oo uu sannadkaasi ka qabtay dhinaca amnigu ma jirto. Waxaanan odhan karnaa marka la barbar dhigo tirada dadka innagaga dhintay dagaalada beelaysan waxa ay aad uga badan yihiin sannadihii xukuumaddii Axmed Siilaanyo ee isla xisbiga KULMIYE.